सरकारले नखोल भन्दा भन्दै खोलिएको बिद्यालय की १५ वर्षीय बालिका को कोरोना ले लीयो ज्या’न ! – Dainik Samchar
April 26, 2021 267
मृ’त’कका दाजु प्रकाश सापकोटाले बहिनीलाई दुईदिनदेखि ज्वरो आएपनि समयमै उपचार नगराउँदा मृ’त्यु भएको दाबी गरे । ‘हामीलाई कोभिड–१९ संक्र’मणकै कारण मृ’त्यु भएको शंका छ,’ प्रकाशले भने । छात्राको मृ’त्युपछि विद्यालयले होस्टेलमा रहेका विद्यार्थीहरुको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गराएको छ । तर रिपोर्ट आइनसकेको विद्यालयका सहायक प्रिन्सिपल एलडी किराँतले बताए । उनका अनुसार छात्रावासमा प्रतिमासँगै ५० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी थिए । ती बालिका स्कुलको छात्रावासमा बसेर परीक्षा दिइरहेकी थिइन्। बालिकासँगै छात्रावासमा बस्ने अन्य बालबालिकाका अनुसार उनलाई दुइ दिन देखि ज्व’रो आएको थियो। तर स्कुलले उपचारका लागि अस्पताल लगेन। गए रातीदेखि ती बालिकाले आफुलाई निकै असहज महसुस भएको साथीहरुलाई बताएकी थिइन्।
Prevकाठमाडौमा पनि निषेधाज्ञाको निर्णय, के गर्न पाइन्छ के पाइन्न ?
Nextगाएक तथा नायक प्रसान्त तामाङ्गले गुमाए आफुलाई जन्म दिने आमा , लेखे सबैलाई रूहाउने स्टाटस पोस्ट